Facaatii odeeffannoo sobaa ittisuuf eenyu gahee akkamii bahachuu qaba? – ኢትዮጵያ ቼክ
Facaatii odeeffannoo sobaa ittisuuf eenyu gahee akkamii bahachuu qaba?
Odeeffannoon sobaa dandeettii murtee beekumsarratti hundaa’e murteessuu lammiilee qancarsuun sochii guyya guyyaa isaanii danqa.
Hirmaannaa dhimmoota biyyaalessaa irratti qaban irrattis dhiibbaa ni qabaata. Kana malees hawaasa gidduutti walqoodinsi akka uumamu gochuun walitti bu’insaaf karaa bana.
Facaatii odeeffannoo sobaa ittisuuf dhaabbileen hojii odeeffannoo mirkaneessuu/qulqulleessuu hojjetan kan akka Itoophiyaa Cheek tumsa taasisanis dhimmichi hirmaannaa kutaalee hawaasaa garagaraa gaafata.
Kanaafis dhaabbileen siiviilii, marsaaleen hawaasaafii mootummaan qindoominaan gaheesaanii bahachuu qabu.
Hubannoo lammiileen waa’ee miidiyaafii odeeffannoo qaban (media and information literacy) guddisuun rakkoolee odeeffannoon sobaa geessisu hambisuuf daran barbaachisaadha.
Lammiileen waa’ee miidiyaafii odeeffannoo hubannoo qaban odeeffannoo sirrii eessaa argachuu akka qaban ni beeku.
Kunis murtee beekumsa irratti hundaa’e akka murteessan isaan dandeessisa.
Gama kanaan dhaabbileen siiviilii gahee olaanaa bahachuu kan danda’an yemmuu ta’u, dhuunfaattis ta’e dhaabbilee biroo walin qindoomun waa’ee miidhaawwan odeeffannoo sobaa hawaasaaf hubannoo uumuufii barsiisuu danda’u.
Kana malees dhimmootni odeeffannoo sobaan walqabatan sirna barnootaa keessatti akka hammataman dhiibbaa gochuun dhalootni hubannoo qabu akka uumamu gama gochuutiin gaheesaanii bahachuu qabu.
Akka fakkeenyaatti Finlaand bara faranjootaa 2014 irraa eegalee qabiyyeewwan facaatii odeeffannoo sobaan walqabatan sirna barnootaa keessatti akka hammataman gochuun dhiibbaa odeeffannoon sobaa geessisu gama dandamachuutiin biyyoota hedduf fakkeenya taaterti.
Gama biraatiin dhaabbileen marsaaalee hawaasaa kan akka Feesbuukii, Guugil, Teelegiraama, Tiwiitara fi kunneen biroo facaatii odeeffannoo soba gama ittisuutiin humna guddaa akka qaban ni beekama.
Kana malees Itoophiyaa keessatti seerris isaan dirqisiisa.
Dhaabbileen kunneen akkaawuntiiwwan, fuulawwanfii chaanaliiwwan odeeffannoowwan dhuga-qabeessa tamsaasanif carraa dursanii mul’achuu kennuun, maloota namootni odeeffannoo sobaa ‘report’ itti godhan salphisuufii afaan fayyadamtootaan gochuun dhimmicharratti hojjechuu qabu.
Ogeeyyii eeruuwwan waa’ee odeeffannoo sobaa hordofuun tarkaanfii fudhatan qacaruunis facaatiin odeeffannoo sobaa akka hir’isuuf gaheesaanii bahachuu qabu.
Haaluma walfakkaatuun miidiyaaleen garee ogeeyyii hojii odeeffannoo mirkaneessuu/qulqulleessuu hojjetan ijaaruun tumsa facaatii odeeffannoo sobaa hir’isuuf taasifamu keessatti hirmaachuu danda’u.
Mootummaan immoo seera facaatii odeeffannoo sobaafii haasaa jibbiinsaa ittisuufii to’achuuf bahe raawwachiisuuf dirqama kan qabu yemmuu ta’u dhaabbilee siiviilii waliin ta’uun lammiileen waa’ee miidiyaafii odeeffannoo hubannoo akka qabaataniif hojechuu qaba.
Dabalataan dhaabbileen marsaalee hawaasaa seerota biyyattii kabajaa jiraachusaanii to’achuu qaba.
Ogeeyyiin hojii odeeffannoo mirkaneessuu hojjetan, dhaabbileen siiviilii, marsaaleen hawaasaafii mootummaan facaatii odeeffannoo sobaa ittisuuf gaheesaanii yoo bahatan jijjiirama fiduun ni dand’ama.
Lammiileenis hubannoo waa’ee miidiyaafii odeeffannoorratti qaban guddisuun akkasumas seera kabajuun gumaacha taasisuu qabu.